ISundowns ibongelwe nangumengameli weFIFA ngokudla isicoco seligi - Impempe
ISundowns ibongelwe nangumengameli weFIFA ngokudla isicoco seligi
IMamelodi Sundowns nendebe yeDStv Premiership
IMamUDABA: OkaDonga Gumbi
Umengameli wenhlangano eyengamele ibhola emhlabeni, iFIFA, uGianni Infantino usebhalele iMamelodi Sundowns incwadi eyobongena ngokuba ngompetha beDStv Premiership.
ISundowns iwole lesi sicoco okwesine kulandelana. Bese kuyisicoco seligi sika-11 kusukela kwasungulwa iPremier Soccer League (PSL) esiwinwa yileli qembu laseChloorkop.
AmaBrazilians acacise ngokuba ngompetha kusasele imidlalo emithathu, kodwa ize yanikezwa indebe yayo ngokusemthethweni ngoMgqibelo. Ikwenze kwabe wumcimbi ngokuthi ibukise ngeCape Town City iyishaya ngo 3-0 eLoftus Versveld ngoMgqobelo ntambama.
“Ngivumeleni ngibongele iMamelodi Sundowns ngokudla isicoco seligi sika-2020/21 eNingizimu Afrika,” ucashunwe esho kanje u-Infantino kwiGoal.com.
“Lesi sicoco, ngaphandle kokungabaza, siwumphumela wokusebenza kanzima, uthando nokuzinikela futhi wonke umuntu okuleliqembu kumele aziqhenye ngale mpumelelo.
“Ngingajabula uma ungadlulisela izilokotho zami kuwo wonke umuntu oseqenjini. Ngifisa ukuniqgigquzela ukuthi niqhubeke ngokusebenza ngokuzwana, uthando nokuzimisela.
“Ngimele ibhola lomhlaba. Ngithatha leli thuba ukunibonga nenhlangano eyengamele ibhola lapho (SAFA) ngokunikela kwenu ekukhuliseni nokuqhakambisa ibhola eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele,” kusho u-Infantino.
Okuyiphoxile nje iSundowns wukuthi yehlulekile wukudlulela phambili kwiCAF Champions League njengoba ikhishwe yi-Al Ahly kulo mqhudelwano. Obengumengameli wayo, uPatrice Mostepe useqhoqhobele isikhundla esifanayo kwiCAF.
Previous Previous post: UTruter uzoyakha kabusha iSwallows ezoshiywa ngabadlali abamqoka
Next Next post: Ucebisa iChiefs ukuba ibuyele ebholeni layo owaduma Osuthwini